Momba anay - Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd.
Ny fankatoavan'ny FDFs
Fankatoavana amin'ny APIs
Sefy famokarana feno
Heparin Sodium (Loharano porcine)
Heparin Sodium (Loharano Bovine)
Heparin Sodium Injection (Loharano Bovine)
Injany Injany Nadroparin
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2000. Ny 19 aogositra 2011, dia voatanisa tao amin'ny tsenan'ny Growth Enterprise of Shenzhen Stock Exchange (stock code 300255) ny orinasa. Manana orinasa fototra efatra famokarana ny orinasa, orinasa sivy, orinasa roa any ivelany ary roa miara-miasa. Orinasa miorina eo amin'ny sehatry ny fanafody biolojika ny orinasa, mampiditra ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famokarana, ny varotra ary ny varotra aondrana. Izy io dia orinasa lehibe teknolojia avo lenta miaraka amin'ny vokatra avy amin'ny vokatra heparin amin'ny vokatra ambany ny lanjan'ny heparin mavesatra ary ny rojo indostrialy heparin iray manontolo eo amin'ny sehatry ny heparin, ary orinasa fanafody mitarika amin'ny famokarana vokatra heparin an-trano.
Hatramin'ny nananganana azy dia nanadihady, namolavola, nanamboatra ary fivarotana zava-mahadomelina amin'ny orinasa cardiovascular, cerebrovascular aretina ary diabeta ary fanafody anti-homamiadana ny orinasa. Ny orinasa dia nampivelatra ny sahan'izy ireo, anisan'izany ireo fitaovana fitsaboana, vokatra tsara tarehy ary fanafody mazava. Ny vokatra dia aondrana any Etazonia, Alemana, Frantsa, Italia, Espaina, Korea Atsimo, Japon, Russia, India, Philippines ary firenena hafa eto amin'izao tontolo izao.
Nandritra ny taona maro, ny CSBIOhas dia nifantoka tamin'ny fikarohana sy ny fandrosoana ary ny fisoratana anarana ny andian-dahatsoratra heparin ary ny vokatra asidra hyaluronic asidra any an-trano sy any ivelany, ary hampiakatra tsikelikely ny ezaka fikarohana sy fampandrosoana eo amin'ny sehatry ny diabeta abenazin sy ny antineoplastic drug c-met. Hanangana lamina stratejika miaraka amin'ny andian-teny heparin isika ho fototry sy fampandrosoana ny zava-mahadomelina marobe amin'ny famaizana.